စိန်ခေါ်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » စိန်ခေါ်ခြင်း	15
Posted by Thint Aye Yeik on Jan 5, 2015 in My Dear Diary, Poetry | 15 comments
Mr. MarGa says: စိန်က သွသူနေတာပါ
သွားခေါ်မှ နောက်တစ်ဆက်ပါ ဆက် လိုက်လာနေဦးမယ်
Maung Thura says: အိုးးးးအို. . .
ကွယ် . . . အဲ့ဒီ စိန်တွေ ရွှေတွေကို မုန်းလွန်း ရွံလွန်းလို့
”တာ့တာပဲ အဘတို့ရေ. . .” —-
kyeemite says: .စိန်ခေါ်ရင် အိမ်ပေါ်ထိ လိုက်သောက်မယ်ကွ..ဂလု..ဂလု Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 53
min kyansix says: ပြဿဒါးဟာ တုံးအစွာဖြင့်
ဓါး လှံတွေနဲ့ လာသတဲ့
လျှို့ ဝှက်ထားတဲ့ နူကလီးယားတွေရှိနေတာ မသိရှာလေတော့လည်း
Maung Thura says: ဖတ်ရှုအားပေးတဲ့ ဦးကြီးနဲ့… ဆရာကျန်… ပြီးတော့…ကဗျာချစ် ပရိသတ်သတ်များ…
aye.kk says: အရှက်တရားမရှိတဲ့
Maung Thura says: သူတို့ကတော့..မလွဲလောက်ဘူး…
ကိုယ့်က လွှဲရမှာထင့်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 177
ko six says: စိန်​​ခေါ်တယ်​
Maung Thura says: နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့…. ကျေနပ်ပါကြောင်း
La Yeik says: ရင်ဘတ်ကြီးသာ ကော့ပေးပလိုက် အူးသူရ…
Maung Thura says: အူးသူရတဲ့…. နိုဗျဇီ… .
Yae Myae Tha Ninn says: ပက်လက်တော့ လန်တယ်… (မပြိုလဲဘူး.. )
မှတ်ချက်။ ။ တကယ် အတည် မန့်သွားခြင်းပါ… လတ်တလော ဖီလင်တချို့အတွက်… လုံးဝ တိုက်ဆိုင်နေတယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12069
Maung Thura says: တိုက်ဆိုင်တယ်ဆိုပါလား..
ရင်ဖွင့်ကြရအောင်.. .အပြန်အလှန်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4010
manawphyulay says: တစ်နှစ်ပြီး တစ်နှစ်
ပြဿ ဒါး ရက်ရာဇာ တွေ ဖြတ်ကျော်
ကံကြမ္မာကို ဘယ်လိုပဲ ပြက္ခဒိန်တွေက သတ်မှတ် သတ်မှတ်
တို့အားလုံး နှစ်တွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီပဲ….
၂၀၁၅ သို့ ချီတက်ကြပါစို့…
Maung Thura says: ဘယ်….ညာ…ဘယ်….ညာ…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.